Miaro sy mampiroborobo ny hany fiteny kreôla mifototra amin’ny espaniola any Azia ny bilaogy ‘Bien Chabacano’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2018 14:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, русский, Français, Ελληνικά, 日本語, Aymara, Esperanto , bahasa Indonesia, English
Ny Chabacano, iray amin'ireo fiteny miisa 170 any Filipina, izay be mpampiasa indrindra any amin'ny tanàndehiben'i Zamboanga farany atsimo ary miavaka amin'ny maha fiteny kreôla tokana mifototra amin'ny teny Espaniola any Azia azy. Mba hiarovana sy hampiroboroboana ny Chabacano, noforonina ny bilaogy ‘Bien Chabacano’ ho loharanom-baovao an-tserasera ho an'ireo Filipiana sy tsy Filipiana liana amin'ny fianarana ny fiteny:
Nandalina ny tantara marevaky ny Chabacano sy ny niandohany tao Zamboanga ny Profesora John M. Lipski, avy ao amin'ny Oniveristem-panjakana Pennsylvania Etazonia :
Mampianatra ny mpamaky ireo teny tsotra indrindra sy ny fehezanteny fototra amin'ny teny Chabacano ny bilaogy ‘Bien Chabacano’. Manasongadina hira malaza sy tantara fohy izy, ary hita ao mihitsy aza ny dikanteny Chabacano ny boky Little Prince. Indro ny fandikanteny Chabacano ny andalana voalohany amin'ny boky Little Prince. Diniho ny fitovizany amin'ny fiteny Espaniola:
Alefan'ny bilaogy ny mpamaky hivantana mankany amin'ny tranonkala sy ny pejin'ny media sosialy ampiasaina ny fiteny Chabacano sy ny fandaharan’onjam-peo, tati-baovao amin'ny fahitalavitra , ary ny fanambaran'ny governemanta .
Manolotra fitantarana fohy momba ny tantaran'ny Chabacano ny bilaogy, ny tsindrim-peony samihafa manerana ny faritany Zamboanga sy ny fiantraikan'ny fifindra-monina ary ny fanaovana ho maoderina ny toe-karena eo amin'ny fivoarany. Mitaraina momba ny tsy fisian'ny ezaka ifanakonana hampandrosoana ny Chabacano ihany koa ny bilaogy: